कुन प्रदेशमा कसको सरकार ? यस्तो निस्कियो हिसाब | Sabaiko Online
Home Flash News कुन प्रदेशमा कसको सरकार ? यस्तो निस्कियो हिसाब
७ मंसिर, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सातवटै प्रदेशमा दलहरुले पाएको समानुपातिक सिट सार्वजनिक गरेपछि अब भावी प्रदेश सरकारको तस्वीर प्रष्ट भएको छ ।
बाँकी प्रदेश नम्बर ४, ६ र ७ मध्ये माओवादीले दुईवटा प्रदेशमा आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । माओवादीका एक नेताले भने- ‘६ वटामध्ये एमाले चारवटा मुख्यमन्त्री लिने हो भने हामीले दुईवटा पाउनुपर्छ ।’अनलाइनखबर वाट